Poteto "Smuglyanka": nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche na foto, ndụmọdụ maka nlekọta na ịkọ ihe, yana aro maka iri nri - Akwukwo nri - 2020
Ọchịchịrị-fruited ịma mma abịa site na Ukraine - nkọwa nduku iche iche "Darkie"
Smuglyanka bụ otu n'ime ụdị poteto dị iche iche na-adọrọ adọrọ nke Ukraine, bụ nke na-ebuwanye ibu n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ ubi na ndị na-azụ ahịa.
Ọchịchị buru ibu buru ibu abụghị nanị ihe tọrọ ụtọ, kamakwa ọ bara ezigbo uru, bara ọgaranya na vitamin na ihe ndị dị mkpa.
N'isiokwu a, ị ga-ahụ nkọwa zuru ezu banyere ụdị dịgasị iche iche, ị ga-amatakwa àgwà ya na ihe ndị a na-ahụ maka ịkọ ihe, chọpụta ụdị ọrịa ọ na-edozi.
Poteto "Smuglyanka": nkọwa nke ọtụtụ na foto
Potato Smuglyanka e bred site Ukraine breeders, originator - NAU Sumy mpaghara. Ikekwe na-eto na mpaghara ọ bụla nwere ihu igwe ma ọ bụ ihu igwe.
Na-atụ aro ka a na-akọ ihe na ọnọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nduku na-eji obi ha akụ n'ugbo na ubi.
N'adịghị ka ọtụtụ mkpụrụ osisi ndị na-adịghị ahụkebe, Smuglyanka na-amị mkpụrụ, na-anabata nri. Mara mma, ọbụna tubers dị mma maka ire ere ma ọ bụ jiri na nri nri.
Aha akara Na-akụ
Njirimara niile na-amị mkpụrụ ọjọọ-fruited dịgasị iche iche nke Ukraine nhọrọ
Oge oge Ụbọchị 65-80
Ihe odide Starch 16-20%
Nkume nke azụmahịa 100-150 gr
Ọnụ ọgụgụ tubers na ohia 10-12
Nabata ruo 480 kg / ha
Onu ahia akwa uto, adighi nma maka ogwu
Ihe omume 94%
Agba aja acha odo odo
Pulp agba ọcha
Ngalaba na-eto eto a hụrụ n'anya ala ọ bụla na ihu igwe
Ọrịa ọrịa eguzogide ọtụtụ ọrịa ndị dị na Solanaceae: cancer potato, cyst nematode cyclo, scab, common viruses.
Atụmatụ nke na-eto eto A na-atụ aro ka igwu nduku na njedebe nke oge na-eto eto, na-ekweghị ka ha nọrọ n'ala
Onye malitere NAU Sumy mpaghara
Darkie odidi - ọkara n'oge okpokoro iche iche. Ọdịdị na-arụpụta elu, na nlekọta dị mma na ọnọdụ ihu igwe dị mma site na 1 hectare ị nwere ike ịnakọta ruo 480 centent.
Ntuziaka: A na-atụ aro ka igwu poteto na njedebe nke oge na-eto eto, na-ekweghị ka ọ dina n'ala. A na-echekwa kụrụ nke ọma, ruo ogologo oge na-enweghị ọdịdị azụmahịa, ọ ga-ekwe omume ịkwaga n'ebe dị anya.
Iji tụnyere mkpụrụ na ịme ka ịdị mma dị iche iche na ndị ọzọ, ịnwere ike iji okpokoro dị n'okpuru:
Aha akara Mwepụta (kg / ha) Iguzosi ike (%)
Na-akụ ruo 480 94
Njikọ 210-360 93
Bushes nke ọkara dị elu, ụdị dị n'etiti, ziri ezi. Ịkọ alaka na ikpo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-adabaghị oke. Epupụta na-acha akwụkwọ ndụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Okooko osisi na-acha odo odo, anakọtara na kọmpụta corolla.
A naghị ejikọta osisi berry ngwa ngwa. E mepụtara usoro mgbọrọgwụ nke ọma, 10-12 nnukwu poteto guzobere n'okpuru ọhia ọ bụla.. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị dị ndụ bụ ihe na-abaghị uru.
Ụkpụrụ nlekọta na-elekọta. A na-akụ poteto na ala ọma ọkụ, a na-etinye tubers dị anya nke 30 cm site na ibe ya. Maka oge, bushes 2-3 ugboro curl, ọ na-atụ aro dosed atọ na otu top mgbakwasa.
Gụkwuo banyere esi esi nri poteto, mgbe na otu esi etinye fatịlaịza, otú e si eme ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị mgbe ị na-akụ, gụọ na isiokwu anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Mkpụrụ osisi adịghị adịte aka ruo ogologo oge, ịkwesịrị ịhọrọ nnukwu, poteto na-adịghị edozi maka ịgha mkpụrụ na ụdị àgwà dị iche iche a na-akpọ.
Otu n'ime uru ndị dị iche iche dị iche iche:
ezigbo uto nke ihe ubi;
iguzogide mmebi usoro;
igbochi ọrịa ndị dị ukwuu;
ezigbo njide mma;
ụdị ahịa ọma nke tubers; mkpụrụ osisi anaghị adị mfe imebi;
iguzogide ihu igwe;
Enweghi ike iche ụdị dịgasị iche iche a ga-ewere dị ka ihe nwere ike ibute mwakpo site na pests. Poteto na-echebara uru nke ala ala, na-adịghị mma loams mkpụrụ a na-ebelata.
tubers buru ibu, na-erukwa site na 100 ruo 150 g;
ụdị oval nke oval;
tubers na-adịdị, dị mma, na-enweghị knolls na potholes;
bee acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo tint, colorly color, moderately thin, smooth;
anya dị elu, na-emighị emeri, ole na ole;
a na-acha ọcha ma ọ bụ ude;
nnukwu starch ọdịnaya, site na 16 ruo 20%;
elu ọdịnaya nke protein, vitamin, amino acids bara uru.
Poteto nwere uto magburu onwe ya: nke na-enwu gbaa, ọgaranya, ma n'otu oge ahụ nwayọọ. Tubers adịghị akọrọ, ọ bụghị mmiri mmiri, mgbe ha na-esi nri, ha na-aghọgharị ma na-agbazekwa na ọnụ.
Mgbe ịcha na ịkụ agbọ poteto adịghị agba ọchịchịrị, ebe ị na-enwe agba agba ụtọ. E nwere ike sie ya mmiri, kụrụ ya, mee ya, ha na-eme ka ikuku. Maka nkwadebe nke mpekere, fries french adịghị mma.
Na okpokoro n'okpuru ị nwere ike ịhụ ọdịnaya starch nke iche iche:
Aha akara Ihe odide Starch
Akpa Lilac 14-17%
Ị nwere ike ịhụ mkpụrụ nke nduku "Smuglyanka" na foto:
Maka akuku họrọ nnukwu poteto na ụdị àgwà varietal. Nhọrọ dị otú ahụ na-eme ka mkpụrụ osisi dị elu, tubers ga-adị ka ìhè na nnukwu. A na-atụ aro iji akara osisi kwesịrị ekwesị maka mkpụrụ akụkụ ọbụna mgbe ị na-akọ ihe, ma chekwaa mkpụrụ ndị a gbakọtara mkpọrọgwụ iche.
A na-emepụta tubers, bụ nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe ọkụkụ. Nke a na-esote site na germination na ìhè ma ọ bụ na mmiri wetdust. Ịcha tubers tupu akuku anaghị atụ aro ya.
Ọdịdịrị Darkie na-ahọrọ ala ndị na-enye ìhè na-adabere na ájá ma ọ bụ ala ojii. A ghaghị ịhapụ ala ahụ nke ọma, họrọ ya na mkpụrụ osisi ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ. Ọ ka mma ịkụkwa poteto n'ubi ndị nwere ụrọ, carrots, kabeeji, radish. Nhọrọ gbanwere ọ bụla afọ 2-3. Usoro dị otú a bụ ezigbo mgbochi megide pests, ọrịa na nsị nke tubers.
Tubers kacha mma kụrụ na olulu, dị nsannsan nke 30-35 cm si onye ọ bụla ọzọ. Omimi - ọ bụghị ihe karịrị 10 cm, chọrọ dum aisles. Osisi ash ma ọ bụ humus na-agbasa site na oghere. N'oge akuku oge ị ga-eji spud 1-2 ugboroakpụ crests nke bushes. A na-atụ aro ka a na-atụgharị ahịhịa ma ọ bụ mulching na ahịhịa.
Na akọrọ ọkọchị, poteto chọrọ ka a ṅụọ mmiri, ịkwado hydration ma ọ bụ sprinkling na-atụ aro ya. Ịbawanye mkpụrụ ga-enyere aka ịmebata ngwongwo ma ọ bụ ihe ọhụụ zuru ezu.
Ọ dị mkpa: Fertilizing akuku kwesịrị ịbụ karịa 2 ugboro, ihe karịrị nke n'elu mgbakwasa ga-eme ka ìgwè nitrates ke mgbọrọgwụ.
Otu izu tupu owuwe ihe ubi, a ga-egbutu osisi nile nke bushes; tubers ga-abawanye ibu, ahụike ma nwekwuo ụtọ.
A na-eme ihe ubi n'ubi ma ọ bụ n'okpuru ebe nchekwa, gbanwee, wee wepụ ya maka nchekwa. A pụrụ ịkụzi tubers maka ire ere ozugbo na ubi.
Na saịtị anyị ị ga-achọta ọtụtụ ozi bara uru banyere nchekwa nke poteto: oge, okpomọkụ, nsogbu ndị nwere ike. Na otu esi echekwa mgbọrọgwụ n'oge oyi, na mbara ihu, na drawer, na refrjiraeto, na peeled form.
Ụdị dịgasị iche iche na-eguzogide ọgwụ dị iche iche nke Solanaceae: cancer potato, na-akpụ akpụ nematode ọlaedo, scab, ọtụtụ virus: Fusarium, Alternaria, Verticillus.
N'okpuru ọnọdụ ọjọọ, ọ ga-ekwe omume na phytophtorosis nwere oria ma ọ bụ akwụkwọ. Maka mgbochi nke mbubreyo, a na-eji ihe ndị e ji ọla kọpa mee ihe na-emepụta ihe. Site na mgbọrọgwụ ma ọ bụ blackleg, a ga-azoputa osisi ndị ahụ site na-ejikọta ala na ahịhịa.
Dika ndi ozo di iche iche, ndi Smuglyanka na adọta pests. A na-agba agba na Colorado beetles, wireworms, na Medvedki. Ịgba ọgwụ nke oge na ụmụ ahụhụ, mmepụta nke ala na tubers tupu ịkọ aka.
Na agha megide Colorado nduku ebe ga-enyere chemicals: Aktara, Corado, Regent, Order, Prestige, Lightning, Tanrek, Apache, Taboo.
Mgbe na-eto eto poteto, a na-ejikarị mmiri ọgwụ ndị ọzọ eme ka mma ma ọ bụ nchịkwa akara.
Gụchaa banyere uru na ihe ize ndụ nke fungicides, herbicides and insecticides in articles bara uru na saịtị anyị.
Poteto "Darkie" - na-eto eto, ma dị iche iche na-ekwe nkwa dị iche iche, nke a na-ewere dị ka kpakpando nke Ukraine nhọrọ. Ọ na-aga n'ihu ndị asọmpi n'okwu banyere mkpụrụ, uto, iguzogide ọrịa, àgwà ahịa nke tubers. E nwere ike kụrụ poteto na ubi mmepụta ma ọ bụ n'ubi onwe onye, ​​ọ bụ zuru ụwa ọnụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi na-eto eto - site na ọkọlọtọ ruo ihe kachasị. Anyị na-adọrọ uche gị na isiokwu ndị dị na teknụzụ Dutch, na esi esi eto, n'okpuru ahihia, na akpa na orù, na igbe ma ọ bụ igbe n'enweghị ike.
Anyị na - enyekwa gị ụdị nduku ndị ọzọ dị iche iche dị iche iche:
Ọgwụgwụ oge Ọkara n'oge Etiti oge
Picasso Nwa ojii Blueness
Rocco Na-akụ Ryabinushka
Slavyanka Onyenwe nke expanses Nevsky
Kiwi Ramos Obi ike
Kadinal Taisiya Mma
Nikulinsky Caprice Vector Dolphin Svitanok Kiev Onye nwe ụlọ Sifra Jelii Ramona